Sida loogu adeegsado emayllada qarsoodiga ah Gmail | Androidsis
Codsiga Gmail si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa, taas oo macnaheedu yahay in howlo cusub lagu soo bandhigo. Mid ka mid ah astaamaha dhowaan yimid, ee cusbooneysiinta dhammaadka Ogast, waa awooda lagu diro emayllo sir ah. Tani waa qaab u oggolaan doona dadka isticmaala Android inay si fudud u soo diraan macluumaad qarsoodi ah.
Maaddaama e-mayladdan sirta ah ee aan dirno ay is-baabi'inayaan. Marka taas aad ayey ugu fududaan doontaa isticmaaleyaasha adeegsada Gmail inay soo diraan macluumaad gaar ah. Waxbadan ayaan kaaga sheegi doonaa qaabkan iyo qaabka aan ugu isticmaali karno taleefankeena Android ee hoos ku xusan.
Fariimahan qarsoodiga ah ee aan u dirayno arjiga, xulashooyinka lagu soo gudbin karo, lagu soo dejisan karo ama nuqul looga qaadan karo fariimahaas waa la jari doonaa Tani waxay u maleyneysaa in macluumaadka uu noqonayo hayso markasta dadka dhexdooda wadahadalkan ayey yeelanayaan.
Habka sirta ah ayaa hadda laga heli karaa aaladaha mobilada waxayna kaa caawin karaan inaad ka ilaaliso macluumaadka xasaasiga ah marinka aan la fasaxin. Waxbadan ka baro astaantan → https://t.co/lmQNElH6C1 pic.twitter.com/Nxtx2yU0pG
- Gmail (@gmail) August 16, 2018
Waxaan ugu adeegsan karnaa shaqadan qaab aad u fudud. Markaa haddii aan dooneyno inaan dirno macluumaad gaar ah, ama aan dooneyno qof aan habboonayn inuu soo galo, waxaan u diri karnaa emayl qarsoodi ah Gmail. Marka xigta waxaan ku tusaynaa talaabooyinka ay tahay inaan raacno.
1 U dir emayllada sirta ah Gmail
2 Ka fur farriimaha sirta ah ee Gmail
U dir emayllada sirta ah Gmail
Si aan u dirno emayl qarsoodi ah waa inaan fulino isla talaabooyinka la xiriira kiiska dirista emayl caadi ah. Waxaan fureynaa codsiga Gmail oo waxaan gujineynaa astaanta ka muuqata shaashadda hoosteeda, si aan u bilowno qorista emayl cusub. Marka xigta, markaan qoreyno farriinta, waa inaan gujino kan badhanka dhibcaha taagan midigta kore ee shaashadda.
Markii aan sidan yeelno, waxaan helnaa liis xulashooyin ah, oo aan ka helno qaabka qarsoodiga ah. Qaabkan waa inaan tixgelinno dhowr dhinac, maadaama aan awoodno isku hagaaji fariimahan sirta ah ee Gmail noo ogolaato inaan dirno. Waxaa jira dhowr dhinacyo oo ay tahay inaan tixgelinno. Waxaan dejin karnaa muddada aan dooneyno inay farriintani sii muuqato. Marka waqtigu dhaafo, emaylkan iskiis ayuu wax u burburiyaa.
Gmail sidoo kale wuxuu ina siinayaa awood aan ku dejin karno erey sir ah fariintaas. Dareenkan waxaan leenahay laba fursadood, oo ah kuwa soo socda:
Heerka: Xaaladdan oo kale, adeegsadayaasha helaya farriintan waxay awoodi doonaan inay si toos ah u furaan, illaa inta ay adeegsanayaan Gmail. Haddii isticmaaleha su'aashu aanu isticmaalin Gmail, markaa waxay ku helayaan eray sir ah e-maylkooda, taas oo ay ugu mahadcelinayaan helitaanka farriinta la sheegay.
Password ahaan SMS: Magaca laftiisa ayaa si cad nooga dhigaya. Qofka farriinta qaata wuxuu ku helayaa eray sir ah SMS. Marka waa inaan galnaa lambarka taleefanka ee qofkaas si aad ugu hesho farriintan lambarka sirta ah.
Markaan tan aasaasno, waxa kaliya ee aan sameyno waa inaan samee waa qoro nuxurka farriinta la sheegay, oo waxaan ku dhejin karnaa faylasha haddii aan rabno. Dareenkaan waxay ahaan doontaa sida markaan fariin caadi ah u dirno adeegsiga arjiga. Marka aan diyaarsano, waa inaan si fudud u dirnaa.
Ka fur farriimaha sirta ah ee Gmail
Markay tahay helitaanka emayl qarsoodi ah Gmail, waxay kuxirantahay ikhtiyaarka uu doorto qofka diraya. Haddii uusan jirin lambarka sirta ah, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan si toos ah ugu furno farriintan adeegsiga arjiga taleefankayaga Android. Farriinta ayaa ka baaba'aysa sanduuqa sanduuqa markii taariikhda la aasaasay ay dhaafto, taas oo aan ku arki doonno emaylka.
Haddii fariintu leedahay erey sir ah, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan ku soo bandhigno fariinta. Gmail ayaa na weydiin doonta inaan ku galno lambarkan furaha ah fariinta. Sidan oo kale, waxaan ku furi karnaa boostada dhib la'aan. Tallaabooyinkan, waxaan awoodi doonnaa inaan ku isticmaalno emayllo qarsoodi ah arjiga emaylka dhib la'aan. Weligaa ma isticmaashay shaqadan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo diro emayllo qarsoodi ah oo leh Gmail on Android